EVY's Kitchen: Oatmeal Healthy Biscuits/Cookies
Oatmeal Healthy Biscuits/Cookies
Last week, I was thinking of bakingahealthy one as my previous attempts contained lots of butter and sugar. Another reason is my BMI trend. It is climbing up and approaching towards the unhealthy range gradually :-(. As I love baking, it is not possible for me not to bake. So I have to look for healthier recipes ( so called " healthier" ) and I found this recipe ( sorry, I cant recall the recipe source). It is just nice that I still have some leftover oatmeal (my sis bought it quite sometimes ago and she didn't want to eat it anymore after very first time eating it), expiry date is still far though.
- 1 Egg (Beaten)
- 100ml Oil
-1 Tbs vanilla essence
-1/8 Cup + 1Tbs of Honey
Ingredients (2 - dry ingredients)
- 1 1/4 cup of flour
- 1/2 cup of Oatmeal
- 1 Cup of mix fruit (dry)
In fact, this isavery simple recipe and it will take you less than 15 mins to prepare. Here is the method. Mix ingredients (1) inabowl. Put all the dry ingredient into ingredients (1) and mix it well using spatula. Pour the paste into baking pan and bake about 20 mins in 180 degree C preheated oven.
My cookies turn out to be better condition than I expected. Let it cool completely in the pan and cut it into bite sizes. Cookies are now ready. Enjoy!
ဒီမုန့်လုပ်နည်းကို ဗမာလိုထပ်ရေးလိုက်ပါတယ်။ အပေါ်မှာ အင်္ဂလိပ်လိုရေးရတဲ့အကြောင်းကတော့ တခြားမုန့်လုပ်တဲ့ blogger တွေနဲ့ communicate လုပ်လို့ရအောင်လို့ပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ ကိုယ်တိုင် ကလည်း ဗမာလို ဖတ်ရ၊ရေးရ တာကိုပိုအားရပါတယ်။ ကျွန်မကလည်းမုန့်မလုပ်ရရင်မနေနိုင်တဲ့သူပါ။ လုပ်တဲ့မုန့်တိုင်းလိုလို သကြား၊ထောပတ်တွေပါ လို့နည်းနည်းအ၀ သက်သာတဲ့ဟာကိုရှာကြည့်လိုက်တော့ Oatmeal Biscuits လုပ်နည်းကိုသွားတွေ့ပါတယ်။ လုပ်ရတာလည် အင်မတန်မှမြန်ပြီး သက်သာပါတယ်။ မုန့်အခြောက်ဆိုတော့ အထားလည်းခံပါတယ် ( ကျွန်မတို့အိမ်မှာတော့ ချွင်းချက်ပေါ့ရှင်၊ မုန့်လုပ်ထားရင် အလွန်ဆုံးခံလှမှ ၃ ရက်ပေါ့..အစားအသောက်မကောင်းရှာကြပါ :D)
မုန့်လုပ်နည်းကတော့ အပေါ်မှာပြောထားတဲ့အတိုင်း Ingredient I ကိုသမအောင်မွှေပါ။ ပြီးရင် Ingredient II ကိုထည့်မွှေပါ။ ပြီးရင် Baking Pan ထဲကိုထည့်၊ ခပ်ပြားပြားလေဖြစ်အောင်မျက်နှာပြင်ညှိပြီး ၁၈၀ ဒီဂရီ အပူပေးထားတဲ့ Oven ထဲထည့်ဖုတ်ပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ မျက်နှာပြင်ညှိပြီးရင် ဓါးနဲ့ နဲနဲအရာလေးတွေပေးထားပါတယ်။ ဒါမှ မုန့်ဖုတ်ပြီးရင် အဆင်သင့်ချိုးရုံပဲလေ။ မိနစ်၂၀လောက် ဖုတ်ပြီးရင်မုန်ရပါပြီ။ မုန်ဗန်းထဲမှာ အအေးခံပြီးရင် အရာလေးတွေအတိုင်းအသင့်ချိုးပါ။ စားဖို့အသင့်ဖြစ်ပါပြီ။
Posted by Evy at 9:36 PM
ကြည့်ရတာစားကောင်းမယ့်ပုံဘဲ..ရှလွတ်... ဒါနဲ့စကားမစပ် လက်ဖက်ရည်က tea mix နှစ်ထုတ်ကို ရေတစ်ခွက်စာလောက်ဘဲထည့်ရင်မပေါ့တော့ဘူး...
အ၀စားသွားနော် အားမနာနဲ့ :-)
Baking Semolina Cake
Steamed Bean Parata